Abadlali baseMzansi abasheshe baye phesheya | News24
Abadlali baseMzansi abasheshe baye phesheya
UMAKADE ebona nenkalakatha yebhola ezalwa ezweni lase-Senegal neyadlala isikhathi eside phesheya kwezilwandle u-El Hadji Diof uthi abadlali baseMzansi abavuke babhukule ukuze kusizakale iqembu lesizwe.
Lesihlabani sodumo nenxele elali dlala ibhola kuchazeke izibukeli sikhala ngokuthi abadlali baseMzansi bathanda kakhulu ukudlalela amaqembu asekhaya isikhathi eside futhi bayazisaba izinselelo ezibahlukumezayo kwamanye amazwe.
Uthe: “Uma uwumdlali kufanele wazi ukuthi ufana nesosha ngoba kungenzeka umsebenzi wakho ukuse noma yilaphi.
“Ngiyavuma uma uwumdlali webhola uqala ngokwakha igama lakho ekhaya, kodwa akuphusile ukuchitha isikhathi eside kwiligi yezwe lakho. Ukuphuma uyozama kwamanye amazwe kuyakuqinisa futhi kukufundise okuningi bese uba umdlali oncono kunakuqala,”kusho u-Diof.
Phela lenkalakatha eyake yadlalela i-Portsmouth, i-Bolton Wanderers kanye ne-Liverpool ikhulume kanje emasontweni ambalwa edlule ngesikhathi izicukuthwane nekomiti elikhankasela indebe yomhlaba e-Morocca (Moroccan 2026 Fifa
FA World Cup bid) ebezivakashele e-Safa House futhi bathola nethuba lokuvakashela amakilabhu ambalwa e-PSL.
Lensephe ikhala ngokuthi abadlali balelizwe babukeka benelisekile futhi befudumele ngokudlala kwi-PSL nokungenzeka ukuthi abanye abacabangi ukuya phesheya.
“Ukwenza nokucabanga kwabadlali base-South Africa kufanele kushintshe. Ukudlala kwi-PSL kuhle futhi kuyisiqalo esihle kodwa ikusasa lakho alingagcini lapho. Ukuya kwabadlali abaningi balelizwe phesheya kunyusa izinga lebhola emaqenjini esizwe ikakhulukazi iBafana Bafana.”
Uthe ulume indlebe uPercy Tau embuza ukuthi yini ndaba namanje esadlala kwiPSL hayi phesheya?. Uthe uTau angafike adlale athi khaxa kwi-Real Madrid ekwi-LaLiga e-Spain. “Lomfana ayikho into angenayo njengomdlali futhi alikho iqembu angeke akwazi ukulidlalela phesheya, ngitshele-ke usalindeni,”kusonga u-Diof.